A few Forex trading myths; yakurukurwa uye yakasarudzwa - Chikamu 1 | FXCC
dzidzo - Zvinyorwa & Tutorials - forex basics nyaya - A few Forex trading myths; yakurukurwa uye yakabviswa - Chikamu 1
A few Forex trading myths; yakurukurwa uye yakabviswa - Chikamu 1
Kunyangwe tichiwana basa rekutengeserana kwekutengeserana kwekambani nekugadzirisa kana kuumbwa, tiri mhuka dzekugarisana uye munzanga yehupfumi yehupenyu yatinogara iye zvino, tichazopedzisira tawana maforums uye dzimwe nzira dzekugarisana nevamwe, kugovana nekukurukurirana mazano edu ekutengeserana. Sezvatinoona maforums uye dzimwe nzvimbo dzekukurukurirana, tichaona kuti zvimwe zvinokanganisa kutora. Chimiro cheboka chinofunga pakupedzisira chinokura uye chinokunda zvimwe zvidzidzo; "Izvi zvinoshanda, izvi hazviiti, ita izvi, usaita izvi, usakanganwa izvozvo, teerera izvi" ...
Bhuku iri rinofunga kuti rinogona kuva rakapararira uye rinokurudzira uye pane dzimwe nguva, kana vatori vakakwana vanotsigira pfungwa yakadaro, kana kuti vanovimbiswa nevamwe vane simba vanoita kudaro, zvino iwe unogona kukanganwirwa nekuda kwekutenda kuti madema ari muchena uye ari kumusoro. Kana mumwe munhu achiedza kushambira kurwisana nemafungiro emafungiro, kunyange kana ari rudyi, vanogona kusangana nevhiri rekuvhara, kunyanya kana vari vatsva kunhaurirano.
Kupindira kunonyanya kukosha kudarika kubuda, kana zvimwewo
Vatengesi veNewice vachagadziriswa purogiramu yavo yekupinda, zvichida iyo ichabatanidzwa nehupikisi zviratidzo izvo, kana dzichienzanisa pamwe chete, dzinobudisa zviratidzo zvakakwana kupinda. Saka chii chinotevera? Iwe unobvepi, iwe uripi mutengo wako, ndeipi ngozi iwe uri kutora pabasa rega rega / uri kupi?
Chero ani zvake anokwanisa kutaurira mutungamiri iye zvino wemujaho, hakuna munhu ane chenguva ipi zvayo, anogona kutaurira kuti ndiani achakunda mujaho kana ichine nzira. Inobva panzvimbo yakakosha zvakakosha nekubuda, iyo inowedzerawo zvakaenzana nebasa redu rekutengeserana. Tinofanira kuva nechikonzero chekupinda mumusika uye tinofanira kuva nechikonzero chekubuda. Chinotipinza matiri chingatibvisa; iyo chiratidzo chekupinda chingave chakafanana (muchechi) kune chiratidzo chekubuda.
Hazvibviri kufanotaura kutengesa mutengo
Hongu uye kwete, kana misika yedu yekare isati yafanotaurwa saka ingadai isingasviki pamusika, ingadai iri pombi yemari yatinogona kutarisa kana kuvhara paanoda. Tinogona kuita kutonga kwakarurama kunobva pane, semuenzaniso, huchapupu hwezvemangwana, maitiro emangwana akaoneswa pamatamba edu, zvakakosha uye kuongorora kwehutano. Kubva pamatongerwo aya anonzwisisika tinofanira kunge tichikwanisa kuona kuti mutengo uripi gona ive ichitungamirirwa pamusoro pepfupi kusvika kune imwe nguva. Kufanotaura kwedu kwokuti mutengo unotungamirirwa, haufaniri kuva chekukanda mari, inogona kunge yakabva pane zvishandiso uye sayenzi inowanikwa kwatiri.
Kukunda kukunda mitengo kunobatsira kubudirira
Chikwata chapamusoro chakanaka hachirevi kuti chinoshandura mukunakira, kana tikakunda zvitanhatu kubva pane imwe neimwe yekutengeserana gumi tinotora, kurasikirwa katatu uye kuputsa kunyange pane imwe chete, asi kurasikirwa kwedu kaviri kana kupfuura kwekuwana kwedu, ipapo tichazobudirira zvakanyanya , kana kurasikirwa nemari. Sezvinotaurwa kazhinji; kunyange 50: 50 kukunda / kurasikirwa kwero inogona kubudirira kana tikawana, semuenzaniso, € 200 pakushambadzira kwega imwe neimwe, asi inongorasikirwa ne € 100 pane imwe neimwe yekutengeserana.
Mibairo yakakwirira yepamusoro ichawana mari yakawanda
Tinofanira kuziva kuti chii chinogona kuitika, izvo zvinoita uye izvo zvisingambofungidziki uye kuvaka sangano redu maererano nezvakaitika zvakadaro. Kune chekutanga mari yekutengesa kushambadzira 1% pazuva rimwe haisi kuitika nguva dzose. Zvinogona kungoitika kamwechete pavhiki; pamusana pekunyorwa kwekarani yakasununguka kusina kana kurova tarisiro, kana imwe yezvematongerwe enyika inenge ichiitika. Nokudaro, kutarisira kushanda zuva rebhizimisi urongwa zuva roga roga, kuwana kubva kune 1% mushamba wekutengesa kana tikatengesa imwe mari yemari, nepo tichishanda chete 0.5% pangozi, inopfuura tariro. Tinofanira kutengeserana nemafambiro uye tinoziva kuti misika yakawanda kupfuura iyo inofambisa, naizvozvo 3% mumusika inofamba mukati mwedzi ingangodaro inokosha, saka tinogona kufunga nezvekuisa mungozi 1.5% yehuta resaiti yedu kuedza kuwana 3% kukura, kana kuti tinofanira kunge tine ngozi 1: 1?
Kuongororwa chete kunotaridza mararamiro edu, asi hazvirevi kuti hakuna humwe uchapupu hwokuti dambudziko guru richaenzaniswa nemubairo mukuru.